Ihe ị ga-ahụ na Romania | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Romania
Romania bụ alaeze nwere mpaghara nke European Union. A hụrụ ya na mpaghara Central na Southeastern Europe, yana akụkụ nke ụsọ oké osimiri na Oké Osimiri Ojii. Ọ bụ mba ebe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ oghere dị iche iche kamakwa obodo ndị na-adọrọ mmasị nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye ndị njem nleta chọrọ ịmata obodo a.
Site na Castle Bran a ma ama nke a na-akpọ Count Dracula maka obodo ndị dị ka Bucharest ma ọ bụ Sighisoara. O doro anya na ọ bụ ebe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ isi ihe iji mee ka otutu uzo di iche iche di egwu. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji hụ ihe niile nwere ike ịmasị anyị na Romania.
2 Ogige Bran
Enweghị njem na Romania nke ga-echefu isi obodo, Bucharest. Obodo a tara ahụhụ na agha ụwa na ọchịchị aka ike taa ka egosiri dị ka ebe nwere ọtụtụ njem nleta. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ nnukwu ebe dịka Chọọchị Katidral, oche nke Onyeisi Ndị Bishọp nke Chọọchị Ọtọdọks nke Romania. Ọ bụ ntọala nke ị ga-ahụ katidral, ụlọ ndị nna ochie ma ọ bụ ụlọ ụka nwere ihe osise mara mma. Ogige Unirii bụ nke kachasị ukwuu, nwere nnukwu isi iyi ma dị etiti, yabụ ọ bụ ebe ọzọ ị ga-eleta. N'aka nke ọzọ, ị nwere obodo ochie nke nwere ụlọ dịka ebe obibi ndị mọnk Stravopoleos ma ọ bụ Athenaeum n'ụdị neoclassical. Bucharest nwekwara Arc de Triomphe nke na-echetara anyị otu na Paris.
Bran Castle bụ otu n'ime nleta dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Romania. A chọtala ya na nso obodo Brasov na mpaghara Transylvania a jikọtara ya na oge na akụkọ ifo nke Bram Stoker's Dracula, ọ bụ ezie na ọ bụ ebe ewusiri ike nke mgbe ochie. N'ezie Vlad the Impaler, akụkọ ihe mere eme sitere na nke Dracula sitere n'ike mmụọ nsọ, ebighị na ya, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị nwa oge ka Mary nke Edinburgh bi. Nnukwu ụlọ bụ nleta na-adọrọ mmasị dịka ọ nwere ụlọ iri isii ma ọ dị n'ebe dị elu. N'ime ị nwere ike ịhụ nchịkọta nke arịa ụlọ na ngwa agha sitere na narị afọ gara aga. Castlọ ihe ngosi nka a-tụgharịrị-ụlọ ihe ngosi nka bụ nleta zuru oke iji jikọta ya na nleta obere obodo Bran.
Obodo mara mma nke Sighisoara bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa ekele ya ochie ochie na a na-ewere otu nke kasị mma na Romania. Ọ bụ n'eziokwu n'obodo a na Vlad II na nwunye ya biri, nwee nwa nwoke, Vlad III nke a maara dị ka Vlad Tepes ma ọ bụ Impaler maka oke obi ọjọọ ya, na-ahapụ akụkọ akụkọ ga-akpali Bram Stoker. Mana na Sighisoara enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ụlọ nke Vlad na ndị mụrụ ya bi ka bụ isi nke mmasị. Ọ nwere ọmarịcha elekere elekere elekere XNUMX nke elekere elekere nke bụ akara obodo ahụ na isi ụzọ mbata na ụzọ mbata na obodo ochie. N'ime ya bụ Museum Museum na ọ nwere nnukwu echiche. Isi ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ steepụ nke ụmụ akwụkwọ narị afọ nke XNUMX, steepụ osisi nke nwere elu ụlọ nke jikọtara akụkụ ala na akụkụ nke elu yana nke ụmụ akwụkwọ gafere. Anyị ekwesịghị ichefu ịgafe obodo ochie ya na-enwe ụlọ ndị ahụ mara mma.
Nke a obodo ahụ dịkwa na mpaghara Transylvania ọ bụkwa otu nnukwu ụlọ-elu nke ndị Transylvanian Saxons wuru na ọchịchọ ha ichebe ala nile nke Alaeze Hungary. O nwere nnukwu uto na narị afọ nke iri na abụọ na nke iri na atọ ma taa ọ bụ otu n'ime obodo ndị a na-agaghị echefu na Romania. N'ime obodo a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ Piata Mare, nke bụ akụkụ kachasị ukwuu, na Piata Mica, obere akụkụ ma nwee ọmarịcha mma. O kwere omume ịrị ụlọ elu nke nnukwu ọnụ ụlọ obodo iji nwee mmasị na echiche nke obodo ma gafere n'okpuru Bridge of Liars or Podul Minciunilor. na Plaza Huet anyị ga-ahụ nnukwu ụlọ ụka katidral nke nnukwu ịma mma na ụdị Gothic.
Na Sinaia bi na ị pụrụ ịhụ ama Peles CastleNke Eze Carol I. Wuru ya: ulo a mara mma ma tinye ya n’elu ugwu nke di ka ihe si na akuko. Emegheghị ya n'afọ niile, yabụ ị ga-enyocha nleta tupu oge eruo iji hụ ma anyị nwere ike ịhụ ya n'ime, mana n'ọnọdụ ọ bụla ọbịbịa ahụ kwesịrị ya n'ihi oke mma ya. N’ebe di nso bu ulo ulo Pelisor na ebe ichu nta. N'ime obodo anyị nwere ike ịhụ ebe obibi ndị mọnk Sinaia na ụdị ụfọdụ nke Byzantine wee gbagoo n'ugwu dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Romania, ebe ndị dị mkpa